Flexible PCB Abavelisi | KwiChina iFlexible PCB Factory kunye nabaxhasi
2 maleko Flexible PCB FPC kunye FR4 stiffener
Olu luhlu lwe-2 PCB eguqukayo esetyenziselwa i-telecom 4G moudule. Iipandawill zivelisa umaleko omnye kunye namacala amabini kunye neMultilayer ukuya kuthi ga kwi-10 izaleko ezijikelezayo. Ukugqitywa komphezulu womgangatho yi-HASL ekhokelela simahla kunye ne-ENIG. Kuxhomekeka kwiimfuno, ubungakanani kunye nolwakhiwo, contours zikhethwa kunqunyulwa laser, kodwa wokugaya ngoomatshini nayo kunokwenzeka.
I-FPC yesekethe eguqukayo ene-3M stiffener kunye nedome
I-FPC ene-stiffener yesinyithi engenasiphelo